Isamsung galaxy s5 vs galaxy samsung inqaku 3
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S5 kunye ne-Samsung Galaxy Qaphela 3
Amawaka eminyaka yembali asebenza njengesilumkiso: bonke ubukhosi ekugqibeleni buwela ekonakaleni. Kubonakala kufanelekile ukuthi i-Samsung iyalela kanye loo nto. Ubukhosi obukhulu. Kwaye akukho mntu ufika apho i-Samsung ingekho ngaphandle kokuqonda, kwaye iingxaki kukuba, kungekudala okanye kamva, inkampani yaseMzantsi Korea kuya kufuneka ivume isiqwenga sommandla wayo kwiintshaba zayo ezilambileyo. Kodwa hayi ukuba i-Samsung iza kuba negama koku, kwaye injalo. Nge-Galaxy S5, i-Samsung iguqula izihlunu zayo ezinkulu ukuze ilizwe lingqine, kwaye ukubona njengoko ngoku ekugqibeleni sinayo iyunithi yokuphononongwa, oko kuthetha ukuba iapos-jump-through-hoops-time ye-S5.
Namhlanje, thina kunye ne-apos; siza kuba nomlo okhohlakeleyo, nokuba ulwalamano phakathi kwezixhobo ezizezinye kwiqela elinye. I-Galaxy S5 inokuba ngumntwana omtsha edolophini, kodwa i-Galaxy Note 3 iqinisekile ukuvavanya ixesha ukuza kuthi ga ngoku, kwaye iyaqhubeka nokujikisa iintloko ngasekhohlo nasekunene. Ngapha koko, intle kakhulu ibonakala ngathi sisibheno seNqaku 3 & apos; ukuba, kumava ethu, nabathandi abangenayo i-phablet bagqibela ngokunyanzelwa ukuba badlule kwisixhobo esikhulu. Nangona utyikityo lwe-3 & apos; utyikityo lwe-S-Pen luhlala luyindawo elawulwayo, i-Galaxy S5 ngokuqinisekileyo izisa ngaphezulu kwezinto ezoneleyo zokubangela ukukhangela umphefumlo kwabo bafuna isixhobo esitsha, abaxabisi be-phablet okanye hayi. Ngokuqinisekileyo, ngesikena somnwe, inzwa yokubetha kwentliziyo, ikhamera ethembisayo, kunye nothuli namanzi anganyangekiyo emzimbeni kwi-tow, i-Galaxy S5 iqinisekile ukuba iyakuchukumisa.
Ke yeyiphi eyona nto ithengwa ngcono? Masikhe singene ngaphakathi kwaye sikhangele impendulo.
Akukho nto inye kwaye akukho nto iphantsi kovavanyo lwexesha, utyikityo loyilo lweSamsung ukuze lubonwe apha. Umahluko ulele kwiimpawu zokuyila ezimbini, zona zona, ezibeka ecaleni ngokwahlukeneyo.
Kanye kwi-bat, ungazixelela ezi zimbini zizixhobo zeSamsung ngapha nangapha, ngaphandle kokujonga okwahlukileyo okwahlukileyo.
I-Galaxy S5 entsha yinguqulelo enkulu ngakumbi kuneyokuqala, kodwa yona iyafana (kwaye iyonwabisa) isirabha esijikelezileyo sesixhobo. Isamsung ayihoyanga i & ldquo; ngubani & apos; umceli mngeni omkhulu weprimiyamu & rdquo;, ngokuthetha, kwaye ubuyile nge polycarbonate nangaphezulu kunangaphambili - idini elifunekayo lokufumana isatifikethi sokumelana namanzi nothuli se-IP67. Oku kuthetha ukuba enye ye-S5 ayinakuyibhida.
Kwaye ngaphambili umphambili we-S5 ungqineka uyinyani kwisithethe se-Samsung, eneqhosha lasekhaya elibonakalayo ngoku eliphindwe kabini njengesikena seminwe, ngasemva kwahluke ngokucacileyo. Umvelisi uthathe isigqibo sokutsiba ngaphezulu kwesikhumba sefeksi ngeli xesha, kwaye endaweni yoko uphathe i-Galaxy S5 ngasemva. Kuyinyani, utshintsho yinto esiyamkelayo kwezona mbono zethu, kodwa oku akuvakali ngathi kukuphucuka. Utshintsho nje. Ngapha koko, ngelixa usemxholweni, uza kufumana umzobo oqhelekileyo weSamsung yenzwa yekhamera, kwaye ngezantsi kwayo - indawo ekwabelwana ngayo yokukhanya kunye nenqanaba lokubetha kwentliziyo.
Ukujonga kwi-Galaxy Note 3, sinendlela efanayo. Umphambili, kwakhona, ubamba iqhosha lasekhaya elibonakalayo (kodwa akukho senzwa yeminwe apha!), Kwaye amaqhosha okuhambisa aseluhlobo olunamandla. Ukutsiba ifowuni ukuze ujonge ngasemva kwayo, sibuye sibe ne-polycarbonate ukuzama ukuba nomtsalane. Iplastiki, inkohliso yesikhumba ngasemva ngokucacileyo izama ukulingisa ukuziva kunye nokubonakala kwesikhumba sokwenyani, kwaye ngokumangalisayo ngempumelelo. Oko kwathethi, ngokuqinisekileyo kuya kubakho abo baziva ngathi bathenga ibhegi yesikhumba yaseLouis Vuitton engeyonyani kwintengiso yeFlea.
Ukusonga oku, i-5.93 oz (168g) Qaphela i-3 ngokucacileyo sisixhobo esikhulu kwezi zimbini, iyalela ukuba icompact (yesayizi yayo yescreen) ubukhulu be-5.95 x 3.12 x 0.33 intshi (151.2 x 79.2 x 8.3 mm). Xa uthelekisa, i-Galaxy S5 ibonakala ngathi ilawuleka ngakumbi kwi-5.59 x 2.85 x 0.32 intshi (142 x 72.5 x 8.1 mm) kunye ne-5.11 oz (145g).
I-Samsung Galaxy S5
5.59 x 2.85 x 0.32 intshi
I-Samsung Galaxy Note3
5.95 x 3.12 x 0.33 intshi
Jonga i-Samsung Galaxy S5 epheleleyo ngokuthelekisa ubungakanani be-Samsung Galaxy Note3 okanye uthelekise nezinye iifowuni usebenzisa isixhobo soThelekiso lweSayizi.
Zombini ezi thave imibala ye-AMOLED eqhelekileyo kodwa i-S5 ikhanya kancinane.
Ayimangalisi loo nto, ngeGPS S5 Samsung yenza inyathelo layo lokuqala ngaphaya komgangatho wangoku we-5-intshi yeflegi. Umvelisi ubeka ukubeka, nangona kunjalo, xa kufikwa kubalo lwepikseli kwiphaneli ye-AMOLED ye-5.1-intshi ebekwe kumzimba weGPS S5 & apos; Isisombululo sihleli kwi-1080x1920, ngoku esebenza kwiiphikseli ezingama-432 nge-intshi nganye. Xa uthelekisa, enye i-5.7-intshi ye-AMOLED eboniswa kwi-Galaxy Note 3 ayinakukhetha ngaphandle kokuvuma isihloko yenye yezona ndawo zinamandla ezikhoyo phaya. Ngesisombululo se-1080x1920, inqaku le-3 kunye neapos's s pixels isebenza kuma-pixels angama-386 nge-intshi, ke inikezela ngamava amancinci okujonga phakathi kwezi zimbini. Isikrini esikwiGlass S5 ikwanokuqaqamba kokubini, nangona kungengeninzi.
Kodwa yile & apos; malunga nokuba i-Galaxy S5 kunye neapos; s ngokucacileyo inzuzo iphela. Xa ukwindlela esemgangathweni (iprofayile yokulinganisa umbala), zombini ezi ziboniso zibethwa bubushushu obubandayo bemibala phantse eyi-8000K, ekude kakhulu kwi-6500K efanelekileyo. Ngenxa yoko, abamhlophe babonakala beblue-ish. Ngaphaya koko, zozibini izikrini zibonisa isimilo esiqhelekileyo se-AMOLED: uluhlaza lugqithisiwe ngokungathi akukho mntu & shishini, kwaye imibala, iyonke, igcwele kakhulu kwaye ayichanekanga ukutsho okuncinci. Oko kwathethi, i-gamma intle kakhulu, nge-2.25.
Amanani angezantsi amele inani lokutenxa kwipropathi nganye, eqatshelwe xa umboniso ujongwa kwinqanaba le-45-degree ngokuchasene nokujonga ngokuthe ngqo.
Itshathi yokuchaneka kombala inika umbono wokuba kufutshane kangakanani umboniso kunye nemilinganiselo yokulinganisa imibala kumaxabiso abo. Umgca wokuqala ubambe imibala elinganisiweyo (eyiyo), ngelixa umgca wesibini ubambe imbekiselo (ekujoliswe kuyo) imibala. Ukusondela kweyona mibala kwezi zijolise kuzo, kungcono.
Itshathi yokuchaneka kwe-Grayscale ibonisa ukuba umboniso unebhalansi emhlophe echanekileyo (ibhalansi phakathi kobomvu, luhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka) kumanqanaba ahlukeneyo engwevu (ukusuka kumnyama ukuya kokuqaqambileyo). Ukusondela kwemibala eyiyo kwezi ziThagethi, kungcono.
Ukujonga kwe-Samsung Galaxy S5 360-Degrees Jonga:
Tsala umfanekiso okanye usebenzise iintolo zebhodi yezitshixo ukujikeleza ifowuni.
Cofa kabini okanye ucinezele indawo yesitshixo ukusondeza ngaphakathi / ngaphandle.
Tsala umfanekiso kwindawo oqhele ukuyijikelezisa ifowuni.
Iphone 12 pro max isikrini sasekhaya
Umboniso onzima, ubuyile umva: Qaphela i-7 vs i-S7 Edge yokuvavanywa kovavanyo lokungqinisisa iglasi yeGorilla eyi-5
Iiapps zisalandelela abasebenzisi be-iOS ngaphandle kwebango leApple & apos; malunga nokuKhangela ukuKhangela kweNkqubo
Ukudinwa nguMncedisi kaGoogle ukubiza igama lakho ngokuchanekileyo?